Adaamaa jechuu maaltu dhoowwe? 'IDA'AMUU'! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAdaamaa jechuu maaltu dhoowwe? ‘IDA’AMUU’!
#Adaamaa jechuu maaltu dhoowwe? ‘IDA’AMUU’
garamitti ademaa jirra-re?
Kitaabicha ‘IDA’AMUU’ sana argine. Boqonnaa 16tti qoodamee fuula 365 irratti dhiyaate. Hanga ammaatti wanti irraa taajjabne, yaadichuma falaasama ida’amuu jedhu sanuu hinfudhannuuf malee, wabii kitaabichaa keessa kitaabni ilmi
Oromoo barreesse ykn immoo kan dhimma Oromoo irratti barraa’e tokkollee hinwabeeffamne. Kunimmoo akka ittuu jibbinuufi dhimma keenyarratti kan hinxiyyeeffanne ta’uu nuumirkaneesse. Garuu, kaayyoon ida’amuu sanuu Oromoo waan hinilaallanneef waa’een Oromoo maal asii godhaaf malee!
Dhuma kitaabichaa fuula 360 irratti jecha maxaaf quddusii irra jirutu barraa’ee jira. Innis: “እግዝአብሄር አኢትዬጵያን ይበረካት ” jedha.
Qarshii dhibba sadiidha ykn $30. Nuti dandeenyee hinbinne; namarraa fuunee ilaalle malee! Kunis, qarshii ittiin rasaasa Oromootti bitaniif galii uumuudha.
Via: Shanlamaa Qalbeessaa